सबैभन्दा ठूलो टिम, उत्तिकै ठूलो आशाः बहुप्रतिक्षित अक्सफोर्डको भ्याक्सिन बन्न अब के–के बाँकी ? – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /International/सबैभन्दा ठूलो टिम, उत्तिकै ठूलो आशाः बहुप्रतिक्षित अक्सफोर्डको भ्याक्सिन बन्न अब के–के बाँकी ?
काठमाडौं। कोरोनाभाइरसको महामारीको बीच हिजो एउटा खुसीको समाचार आयो । कोरोनाभाइरसविरुद्ध काम गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो मानिएको टिमले भ्याक्सिनको मानवमा परीक्षण सुरु गर्यो । आगामी सेप्टेम्बरसम्म भ्याक्सिन बजारमा ल्याउने घोषणा गरेर काम अगाडि बढाएको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको यो टिमको कामलाई अहिले पूरै विश्वले चासोपूर्वक हेरिरहेको छ । यसलाई कोरोनाभाइरसविरुद्ध विश्वकै सबैभन्दा ठूलो युद्ध मानिएको छ । यदि यो परीक्षण सफल भएमा आगामी सेप्टेम्बरसम्म यो भ्याक्सिन बजारमा आउनेछ ।
पूरै विश्वको नजर अहिले लण्डनमा अवस्थित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको प्रयोगशालामा टिकेको छ । पूरै विश्वले अहिले यो परीक्षण सफल होस् भन्ने कामना गरिरहेको छ । अक्सफोर्डले विश्वमै सबैभन्दा धेरै लगानी गरेर सबैभन्दा ठूलो डाक्टरहरुको टिमले करिब ६ हजार मानिसहरुमा परीक्षण गरेर सबैभन्दा छिटो कोरोनाभाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन विकास गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यसका लागि ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा २१ भन्दा बढी प्रयोगशालाहरुमा यसको ट्रायल भइरहेको छ । आगामी २ महिनामा यो भ्याक्सिन बनेर तयार हुने र सेप्टेम्बरसम्म १० लाख डोज बजारमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कोरोनाभाइरसको भ्याक्सिन बनाउने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो परियोजना बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा चलिरहेको छ । बेलायतमा लगातार कोरोना प्रकोपमा भइरहेको वृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै यहाँको सरकारले पनि यो परियोजनालाई ठूलो आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । यो परियोजनालाई २ फेजमा बाँडिएको छ । पहिलो फेजमा वैज्ञानिकहरुले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको प्रयोगशालामा यो भ्याक्सिनको ६ हजार बिरामीहरुमा ट्रायल गरिरहेका छन् । अर्को फेजमा इम्पिरियल कलेज अफ लण्डनलाई भ्याक्सिनमा रिसर्च गर्नको लागि बेलायत सरकार ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च गर्दैछ ।
रिकभरी ट्रायल के हो ?
रिकभरी ट्रायलको अर्थ हो र्याण्डमाइज्ड इभालुएसन अफ कोभिड १९ थेरापी । यो औषधीको ट्रायल अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको तर्फबाट हुँदैछ । ट्रायलमा इङल्याण्डका कैयौं अस्पतालका डाक्टरहरु सहभागी हुनेछन् । यसको ट्रायल ५ हजार भन्दा धेरै कोरोना पोजेटिभ बिरामीहरुमा गरिनेछ । रिकभरी ट्रायलमा सहभागी हुन तयार भएका बिरामीहरुलाई इङल्याण्डका १६९ हटस्पटबाट छानिएको हो । उनीहरुमाथि यो ट्रायल गरिनेछ ।
कसरी हुन्छ रिकभरी ट्रायल ?
ट्रायलका लागि तयार भएका बिरामीहरुले कन्सेन्ट लेटरमा साइन गर्नुपर्नेछ । बिरामीको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित तथ्यांकको रेकर्ड कम्प्युटरमा राखिनेछ । औषधीको डाटाबेसको हिसाबले बिरामीलाई उपचारको विकल्प दिइनेछ । जुन बिरामीहरुमाथि ट्रायल गरिँदैछ उनीहरुको कोरोनाको प्रक्रिया चलिरहनेछ । बिरामीहरुलाई ट्रायलका क्रममा कोरोनाको औषधीका साथै अन्य औषधी पनि दिइनेछ ।
सोमबार मात्रै कतारमा ५ सय ६७ जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि, एकको मृत्यु
मस्को नजिक हेलिकप्टर दुर्घटना, सवार सबैको मृत्यु
भारतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५ सय १९ पुग्यो, महाराष्ट्रमा मात्र ३ हजार ६ सय बढी संक्रमित
अमेरिकामा दैनिक मृत्यु संख्यामा कमी, अहिलेसम्म ५५ हजारले गुमाए ज्यान